योगेश भट्टराईले बेइज्जत गरेका छैनन्, विदेशीले वास्तै नगरेपछि कसरी बेइज्जत हुन्छ ? « GDP Nepal
Published On : 8 January, 2020 10:04 am
काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले आगलागीले पीडामा रहेको अष्ट्रेलियामा नेपाल भ्रमण वर्ष प्रवर्द्धनको कार्यक्रम गरेर मुलुकको बेइज्जत गरेको आरोप लागिरहेको छ । मन्त्री भट्टराईले यसको खण्डन पनि गरेका छन् भने त्यहाँ भएको एक र्यालीलाई प्रहरीले रोकेको भने स्थानीय नेपालीले नै पुष्टि गरिसकेका छन् ।
नेपालमा मन्त्री भट्टराईको कदमलाई लिएर विभिन्न टिप्पणी भइरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा वैज्ञानिक उत्तमबाबु श्रेष्ठले भने ट्वीटरमा यससम्बन्धी केही मननीय धारणा राखेका छन् । उनले मन्त्रीको कार्यक्रममात्र नभइ समग्र भ्रमण वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्द्धनकै विषयमा गरेको टिप्पणी जस्ताको तस्तैः
योगेश भट्टराइले वेपत्तै गरे वा वेइज्जत गरे भन्ने कुरा हामीलाइ लागेको मात्रै हो । पूर्वाग्रह वा आग्रहको कारण। अष्ट्रेलियाको प्रायः सबै मिडियाको अनलाइनमा नेपाल खोज्दा महिनौं पुराना बासी समाचार देखिन्छ । विदेशीले वास्तै नगरेपछि कसरी ठूलै काम गरेको वा वेइज्जत गरेको हुन्छ ?
नेपालबारे जानकार विदेशीलाइ हाम्रो अर्थतन्त्र, भ्रष्ट्राचार, आनीवानी, कार्यशैली आदीको बारेमा आन्द्राभूँडी थाह छ । काठमाडौंमा ठूलै बुद्धि विलास भएपनि नेपाल विश्वको राजनैतिक र सामरिक रंगमचमा प्रभावहिन राष्ट्र हो भन्ने स्पष्ट छ । उनीहरू विचका वेइज्जत र इज्जतको कुरा भएन ।
विश्वभरका आइकनिक ठाँउ सिड्नी, पेरिस, न्यूयोर्क, लन्डनमा नेपालको लोगो र झन्डा अहिले पर्यटन मन्त्रीले सिड्नीमा जसरी फहराऔं र तत् देशबाट आउने पर्यटकलाइ एरपोर्रटमा सोधौं झन्डा देखेर आएको हो भनेर ? कतिले हो भन्लान् ?
नेपाल आउने भनेर आएका विदेशी मध्यमस्तरका पर्यटकहरूले नेपालीले भन्दा बढि ज्ञान यहाँको भूगोल, हिमाल, संस्कृति, जैविक विवधताको राखेका हुन्छन् । इन्टरनेटदेखि पुस्तकसम्म, साथीदेखि अनलाइनको रिभ्यू हेरेर आएका हुन्छन् । एनआएनले जाऊ भनेर होइन ।
गरिव विदेशीले नेपालको नामै सुनेका हुदैनन् उनीहरूलाइ जीउ र परिवार पाल्न धौ धौ छ । हामीलाई जस्तो संसारभरको घटनाको बारेमा अल्पज्ञान राख्न, विपदमा प्रे गर्न वा चाडवाडमा शुभकामना दिन, खेलकुदमा उत्सव मनाउन कहाँ फूर्सद छ ?
बेइज्जत इज्जत हामीभित्रै भएको हो । हामीलाइ थाहै छ हामी कसरी काम गर्छौं । संविधानदेखि साफ खेलकुद रातारात काम गरेर जुगाड गरेकै हौं । नेपाल होस् या विदेश हामी यस्तै त हो नि ब्रो ।
को हुन् उत्तमबाबु श्रेष्ठ ?